Xusuusta maanta oo kale 1992: marines-ka Mareykanka ayaa ka degay Soomaaliya - BBC Somali
Image caption Ciidanka Mareykanka ayaa u tagay Soomaaliya hawlgal gargaar
Ciidanka Mareyanka ayaa tagay Soomaaliya si ay u taageeraan gargaarka loo fidinayo kumannaan Soomaali ah oo ay macaluul la soo daristay.
Ciidamaddu waxay ka degeen Soomaaliya waaberigii maanta oo kale. Hawlgalkoodu wuxuu horkacayey imaanshaha 35 kun oo ciidammo ah oo ka kala yimid darsin wadammo ah oo ku ka qayb qaadanayey hawlgalka Mareykanku horkacayey si ay u joojiyaan bililliqadda & wax isdabamarinta dhabaha u xaartay in cuntadu aannay gaarin dadka baahan.
Ciidanka Mareykanka waxay filayeen inay ka horgataan falalka kooxaha dableyda ee wadanka colaadduhu assiibeen madaxfurashada u qabsaday, colaadda sanadkii hore ayey ku dhinteen 300,000 qof tan iyo markii laga tuuray xukunka Maxamed Siyaad Barre isla markaana hogaamiyayaasha dagaalku iska horyimaadeen.
Laakiin intii ciidamadda Mareykanka lagala hortagi lahaa dagaal waxay Marines-ku la kulmeen soo dhaweyn.
Ugu horreyn lix illaa sideed askari oo dabaallanaya ayaa xeebta Muqdisho cagta soo dhigay waaberigii hore iyaddoo dayaxu uu cirka ka muuqdo.
Ka dibna sadex doonyo cinjir ka samaysay ayaa xeebta yimid waxaana ka soo degayt 24 askari waxay ku socdeen buuraha kaabigooda iyadoo ay ifinnayaan layrarka kaamirooyinka Telefishinadda.
Ciidamadda Marines-ka oo ka buuxa dabbaabaadka bari biyoodka ah ayaa ka soo daatay markabka USS Juneau iyadoo xeebta ay ka soo degeen 1800 oo askari.
Hawlgalkoodu wuxuu ahaa inay ammaan ka dhigaan garoonka diyaaradaha & dekadda Muqdisho agagaarahooda si cuntada iyo daawadda ay xannibeen kooxaha maleeshiyaadka Soomaalida si nabad ah loogu daabulli lahaa kumannaan dadka gudaha oo macaluul la geeriyoonayey.
Saacad gudaheed ciidanka Mareykanka markii ay soo degeen illaa darsin barkiis dhawaaqa rasaasta oo aan la ogayn ujeedkeeda ayaa laga maqlay duleedka Muqdisho.
Dagaalkaas wallow uu jiray, haddana wadooyinka Muqdisho waxay ahaayeen kuwa cidlo ah.
Goor sii horreysay magaalada Washington, Madaxweynihii la doortay ee Mareykanka Bill Clinton wuxuu soo bandhigay "jadwal dhalanteed" oo ku aadan bixitaanka ciidamada Mareykanka.
Wuxuu intaas ku daray "Waxaan xushmaynayaa isla markaana u riyaaqayaa rajada Madaxweyne Bush ee ah ee tilmaamaysa in ciidamadda dhulka ay halkaas [Soomaaliya] isaga soo baxaan waqti illaa bartamaha January ah ,ayna tahay mid shaqayn karta in hawshaas la qabto".
Clinton wuxuu yiri "Laakiin arrintu waa in Mareykanku ciidankiisa ku sii hayo dhulkaas muddo ka badan todobaadyo yar iyo in kale, waxaan filayaa in taasi ku xiran tahay muddada ay qaadan karto inta ay ku dhamman karaan hawlgalkooda".
Labadii hogaamiye ee ugu tunka waynaa hogaamiyeyaashii dagaalka Soomaaliya Jeneral Maxamed Faarax Caydiid iyo Cali Mahdi Maxamed waxay ugu baaqeen dagaalyahannadoodda inay la shaqeeyaan ciidamadda Mareykanka, isla markaana ay isaga fogaadaan dekadda & garoonka dayuuradaha.
Laakiin Robert Oakley, Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsanaa Soomaaliya wuxuu la kulmay labada nin maalmahaas waxaana uu aaminsan yahay in midkoodnna aannu awood buuxda u lahayn xakameynta dableydiisa.
Sida laga soo xigtay waaxda difaaca Mareykanka ee the Pentagon ilaa 35 wadan ayaa Mareykanka ugu yaboohay caawimaad hawlgalka ciidan iyo dhaqaale.
21 kun oo ciidammo Faransiis ah ayaa xiligaas la filayey inay ku biiraan Mareykanka ciidankiisa.